04 Oktobra 2019 - FJKM Québec - Canada
3 octobre 2019 by Njaka Ramanandafy
Fandalinana ny Boky araka ny JEREMIA
GENESISY 2 : 19-37
2:19 Ary tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra; dia nentiny tany amin-dralehilahy ireny hahitany izay hanononany azy avy; ary izay rehetra nanononan-dralehilahy ny zava-manan’aina rehetra, dia izany no anarany.
2:20 Dia nomen-dralehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mbamin’ny bididia rehetra; nefa tsy hita izay vady sahaza ho an-dralehilahy.
2:21 Ary Jehovah Andriamanitra nahasondrian-tory an-dralehilahy, ka dia natory izy; dia naka ny taolan-tehezany anankiray Izy ka nanakombona nofo ho solony.
2:22 Ary ny taolan-tehezana izay nalain’i Jehovah Andriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy.
2:23 Ary hoy ralehilahy: Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy.
2:24 Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany ireo.
2:25 Ary nitanjaka izy mivady, dia ralehilahy sy ny vadiny, nefa tsy nahalala henatra izy.
Mampibebaka antsika ny tenin’ny Tompo
1-Ny haratsianao no hanafaizana anao , ary ny fiodinanao no hananarana anao » (and19). Tsy mijery fotsiny ny hadalantsika ny Tompo fa manafay Izy . Zavatra iray loha no manery Azy dia ny fitiavany antsika .
2-« Fa Izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra , dia rantsana tsara avokoa , ka ahoana no nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa? » (and21). Zava-mahagaga miverimberina amin’ny ambaran’ny Tompo ity : efa tena nanao izay hahasoa isika no nivadika ho ratsy ? Efa nomeny i Jesoa , ilay foto-boaloboka hirafetantsika (Jao 15.1-8). Nahoana no niala taminy isika ?
3-Ry taranaka , dinihonareo ny Tenin’ i Jehovah« (and31)
Ny fiverenana amin’ny Tenin’ Andriamanitra no hany hahatonga saina antsika ka hisian’ny fibebahana marina ho famonjena antsika . Hevero indray ny tena anjara toeran’ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny fiainanao .
4-Foana ny namelezako ny zanakareo , fa tsy zaka nanarina izy » (and30). Mafy fo sy mafy loha , tsy laitra anarina : izany no toetrantsika . Ataon’ny Tompo ny teny sy ny famaizana , fa tsy mety miova ho tsara isika .
5-« nefa hoy ianao: tsy manan-tsiny aho…tsy nanota aho » (and35). Fanamarinan-tena re izany ! Na dia efa hita miharihary izao aza ny fahadisoantsika , dia mbola hanamari-tena ho tsy manan-tsiny ihany ve isika?